बुडापेस्टमा के हेर्ने | यात्रा समाचार
बुडापेस्टमा के हेर्ने
मारिएला क्यारिल | | बुडापेस्ट, के हेर्ने
बुडापेस्ट यात्रामा जान यो युरोपको सबैभन्दा लोकप्रिय शहरहरू मध्ये एक हो। Tourists० बर्ष भन्दा पुरानो पर्यटकहरूका लागि यो शहर बर्लिन पर्खाल पतन भए पछि फेला पारिएको मोती मध्ये एक हो। आज, त्यो धेरै लामो समय भएको भए तापनि, हालसालै र पुरानो इतिहास यस शहरको प्रत्येक कुनामा स्पष्ट छ।
वा दुई शहरहरू? यो बुडापेस्ट मूल रूपमा दुई शहरहरू, बुडा र कीट थियो। वा बरु, तीन, किनकि बुडा पनि त्यहाँ थियो। कुन प्रक्रिया, कस्ता कथाहरू, कुन घटनाहरू हुँदै यस शहर यूरोपको सब भन्दा सुन्दर बन्यो? ¿हामी बुडापेस्टमा के देख्न सक्छौं? त्यो सबै सिक्न?
2 बुडापेस्टमा पर्यटन
मैले हालको शहर माथि भनें तीन प्राचीन शहरहरूको मिलन हो, जुन मध्ययुगीन समयमा तीन भिन्न क्षेत्रहरूको रूपमा अवस्थित थियो: बुद्ध यो राजतन्त्रवादी शक्तिको आसन थियो, कीट १ th औं शताब्दीमा विकसित भयो ओबुडा यो सब भन्दा ग्रामीण भाग थियो।
यो क्षेत्र हजारौं बर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको छ। यो भन्न लायक छ रोमीहरू यताउता हिंडेयद्यपि यो १ seriously1873 मा तीन शहरहरूको मर्जर पछि अझ गम्भीर रूपमा विकास गर्न सुरु भयो। त्यस समयमा र पहिलो विश्वयुद्ध सम्म शहरले ठूलो सहरी परिवर्तनहरू पार गर्यो: पुलहरू, संग्रहालयहरू, क्याफेहरू जताततै, कन्सर्टहरू, ट्रेन स्टेशनहरू।
त्यसपछि दोस्रो युद्ध र १ 1956 XNUMX को क्रान्ति आयो जुन दुबै मानवीय क्षति र वास्तुकलाको सम्पदामा खर्च भयो।
सहर डान्यूबको दुबै तिर टल्किन्छ त्यसैले त्यहाँ सँधै पूलहरू थिए, तर el पुल थियो चेन ब्रिज। काउन्ट स्चेचेनीको पहलमा निर्माण गरिएको र बेलायती आर्किटेक्ट र इञ्जिनियर जोडीले बनाएको यो बहुमूल्य सम्पत्ति हो।
पुलको काम अन्त भयो 1849, एक सुरुचिपूर्ण सिक्रीहरू सहित ढु stone्गा पुल जुन यसको समयको आश्चर्य थियो। दुर्भाग्यवश दोस्रो युद्धको बमले यसलाई नष्ट गर्‍यो, तर पछि पुन: निर्माण र आधुनिकीकरण गरियो। पुलको तस्विर लिनुहोस्, एकदम रातमा बत्तीयो शहरको यो आइकनको राम्रो स्मृति हो।
बुडापेस्टको फोटो लिनको लागि अर्को राम्रो स्थान हो सैन एस्टेबनको बासिलिकाको दृष्टिकोण। यो शहरको यस भागको सब भन्दा उच्च दृश्य हो, पुरानो कीट, र हामीलाई एक दिन्छ Vision 360० दर्शनकुन भव्य छ। बासिलिका कुनै अरू होइन तर बुडापेस्टको क्याथेड्रल हो र संसद भवनको साथसाथै यो शहरको सब भन्दा अग्लो छ।
यो कुनै पुरानो चर्च होइन, यसको जग १ 1851 XNUMX१ बाट सुरु भयो र यो २० औं शताब्दीको शुरुमा मात्र समाप्त भयो। नदीको अनुहार नदीको अनुहार हो र ती जगहरू चर्च जत्तिकै ठूला छन्। यो छ नियोक्लासिकल शैलीयोसँग दुई घण्टा टावरहरू छन् र ती दुई घण्टी मध्ये एक युद्धकालमा स्थापना भएको थियो। यसको चैपलमा छ सान्ता डिएस्ट्राको अवशेष, राजा स्टीफन प्रथमको मुमीफाइ हात, हंगेरीको पहिलो राजा र, संत।
तपाईं सीढीहरू वा एलिभेटरबाट माथि जान सक्नुहुन्छ र घोडचढी कोठामा, दुई उचाईको बीचमा, नमूनाहरू र प्रदर्शनहरूका साथ एउटा कोठा छ। यो सामान्यतया बिहान १० बजे खुल्छ र साँझ 10: .० तिर बन्द हुन्छ। यो प्रवेशद्वार संग छ।
अर्को रोचक चर्च यदि तपाईंलाई पवित्र भवनहरू मनपर्दछ भने म होबुडा महलको हाम्रो लेडीको चर्च। यो एक सुपर ऐतिहासिक साइट हो, सुन्दर, गोथिक शैलीमा र धेरै सुन्दर ढंगले सजाइएको। हुन जान्यो राज्याभिषेक साइट राजाहरूको लागि र आज यो सामान्यतया कन्सर्ट र प्रदर्शनहरू प्रस्ताव गर्दछ। यो को नामबाट पनि चिनिन्छ मथियास गिर्जाघर र यसै ठाउँमा परम्परा अनुसार पहिलो ह Hungarian्गेरीका राजा सेन्ट स्टीफनले अन्ततः १०११ तिर मन्दिर बनाए।
निम्न सबै सार्वभौमहरुले उनीहरु लाई थपे तर यो राजा मटास प्रथमले उनलाई दिए पुनर्जागरण स्पर्श। ऊसँग एक समय थियो जब उनी परिवर्तन भएका थिए तुर्क साम्राज्य अन्तर्गत मस्जिदवा, त्यसैले यो उत्कृष्ट ध्वनिकीको साथ वास्तवमा एक सुन्दर मन्दिर हो। यहाँ, ऐतिहासिक तथ्यको रूपमा, सबैभन्दा प्रसिद्ध सिसीको पति सम्राट फ्रान्सिस्को जोसे प्रथमको मुकुट लगाईयो।
El बुडा महल बुडापेस्ट यात्रा गर्दा यो अवलोकन गर्न मिल्ने आकर्षण हो। यस बिन्दुमा फ्युनिकुलरबाट पुग्न सकिन्छ, सबै भन्दा सिफारिश गरिएको र सुरम्य। कार पुराना छन् र दृश्यहरू उत्तम छन्। मिनेटमा अरू केहि पनि आदम क्लार्क स्क्वायर महलको साथ जोड्दैन। १ 1987 XNUMX देखि विश्व सम्पदा होly प्रत्येक दिन बिहान 8 देखि साँझ। सम्म चल्दछ। सेवा प्रत्येक पाँच वा दस मिनेटमा चलेको छ, माग र मर्मतको आधारमा अजीब सोमबारमा गरिन्छ।
बुडा महल एक ऐतिहासिक भवन हो,aमहल र दरबार परिसर ह the्गेरीयन राजाहरूको। सब भन्दा पुरानो निर्माण १ XNUMX औं शताब्दीको हो तर विशाल, बारोक प्यालेस जुन हामी आज देख्छौं १ XNUMX औं शताब्दीको हो। यो पहाडमा खडा छ जुन मुनिको सुरम्य Várnegyed वा महल क्वाटर, मध्ययुगीन, बारोक र नियोक्लासिकल जस्तै छ। सत्य यो हो कि शहरको यो अंश यति सबै द्वन्द्वहरूको दृश्य थियो केही चोटि विनाश र पुनर्निर्माण गरिएको छ, भाग्यवस, धेरै ऐतिहासिक र कलात्मक कठोरताको साथ।
आज तपाई मध्ययुगीन अवधिको बाँकी अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ, चैपल, गोथिक हल, शाही अपार्टमेन्ट, औपचारिक कोठा, राज्याभिषयक कोठा र सिंहासन कोठा, उदाहरणका लागि। महलको दक्षिण शाखामा बुडापेस्ट इतिहास संग्रहालय: चार फ्लोरहरू सबैको साथ जुन तपाईंलाई शहरमा चासो लाग्न सक्छ।
El माउन्ट जेलर मात्र २ 235 मिटर अग्लो छ तर यो रूखहरूको सौन्दर्य हो जुन मौसम अनुसार रंग परिवर्तन गर्दछ। यसले हामीलाई पनि दिन्छ राम्रो दृश्यहरू शहरको र ईसाई बिशपको सम्मानमा यसका लागि १० in p तिर मूर्तिपूजकहरूले हत्या गरेको सम्मान गरिएको छ। यो जहाँ छ गढी, सैन्य मूल को एक विशाल जटिल, तर पनि चर्च, प्रसिद्ध जेलर्ट स्पा र यसको होटल।
१ th औं शताब्दीमा यस किल्लाले पूरै क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न '48 को क्रान्तिकारीहरू' भनेर चिनिन्छ। त्यसका लागि दर्जनौं तोपहरू स्थापना गरिएका थिए। पछि, सोभियत शासन अन्तर्गत, मुक्ति को मूर्ति, दोस्रो विश्व युद्धमा विजयको प्रतीक।
हामी पहिले कुरा संसद भवन, एक स्थान जहाँ तपाईं एक घण्टा मा एक मनोरन्जनात्मक पैदल यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई गुम्बजको भ्रमण गर्नुहुन्छ हंगेरियन शाही मुकुटको रक्षा गर्छउदाहरणका लागि, पर्व सीढी, माथिल्लो घर वा हेम साइकल। यो हंगेरीको राज्यeको हजारौं वार्षिकोत्सवमा निर्माण गरिएको हो सबैभन्दा प्रसिद्ध अंग्रेजी संसदबाट प्रेरितयो पुनर्जागरण र बारोक शैलीमा छ।
अन्तमा, हामी नामकरण रोक्न सक्दैनौं इस्ला मार्गारीटा, २ 2800०० मिटर हरियो टापु हो जुन सहरको सबैभन्दा लोकप्रिय हरियो र मनोरन्जन स्थल। यो शिकारको मैदान हुने गर्थ्यो तर आज त्यहाँ मध्ययुगीन भग्नावशेष, टेनिस कोर्ट, मूर्ति र अन्तहीन पैदल यात्राहरू छन्। त्यहाँ एक राम्रो जापानी बगैचा, एक पुरानो पानी टावर र धेरै सुन्दर रूखहरू पनि छन्।
La एन्ड्रिसी एवेन्यू यो १ th औं शताब्दीमा बुडापेस्टलगायत युरोपेली शहरहरूको आधुनिकीकरणबाट जन्मिएको हो। स्पष्ट रूपमा पेरिसियन एभिन्यूहरूबाट प्रेरित भएर, एउटा सुन्दर एभिन्यूको जन्म भयो, यसको वास्तुकलामा थोरै आडम्बर, र धेरै सुरुचिपूर्ण। यो उनको बारेमा छ त्यहाँ ह Hungarian्गेरी स्टेट ओपेरा छ, हाउस अफ टेरर म्यूजियम, एकेडेमी अफ फाइन आर्ट्सs ... तीन क्षेत्र र p छन्वा यसको तल शहरको मेट्रो चल्छ, यूरोपको सब भन्दा पुरानो।
र अन्तिम तर कम्तिमा होइन, कसैले स्पाको बारेमा कुरा नगरी बुडापेस्टको बारेमा कुरा गर्न सक्दैन र सबैभन्दा प्रसिद्ध यो हो Széchenyi स्पा। यस साइटमा २१ पूलहरू छन् जसमा बिभिन्न उपचारात्मक सेवाहरू छन् र बिहान छ बजे खुल्छ, राती १० बजे बन्द हुन्छ। यो एकदम अनुभव र शरीरको लागि खान हो यदि तपाईं एक धेरै सक्रिय पर्यटक हुनुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » बुडापेस्ट » बुडापेस्टमा के हेर्ने
रोममा पियाजा नवोना